Boeing 777-200ER Bilood 6 2 maalmood ka hor #1591
Sidee baan u beddeli karaa feylasha diyaaradda CFG ee 777 si aan ugu daro albaab kale, furitaan iyo xiritaan.
Waxaan sidoo kale isticmaalaa FSDT's GSX waxayna bixisaa ikhtiyaar cunno, taas oo muujineysa in gawaarida xamuulka qaada ay u jiidayaan diyaaradda isla markaana ay u istcimaalaan albaabbada gurmadka degdegga ah ee ku yaal dhinaca midig ee dayuuradda inay ku raraan cuntada. Albaabada waa in la furo dabcan. 777 looma habeynin 5 albaab, kaliya 4. Waxaan ku daray albaabka 5aad faylka CFG, laakiin waxba isma bedelin. Isbeddelkan miyuu suurta gal yahay, haddii ay sidaas tahay, sidee. Wixii talo soo jeedin ah aad baa loo bogaadinayaa.
Boeing 777-200ER Download 5 bilood 1 toddobaad ka hor #1615
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Yuri-martins19
Boeing 777-200ER Bilood 4 3 todobaad ka hor #1630
Waxaan dhowaan isku dayay inaan duulo diyaaraddaan oo leh 'autopilot-ka' oo aan ku sii daro oo kaliya inaan ogaado inaan gaariga 'autopilot' uusan u muuqan inuu ku xiran yahay. Xitaa aniga oo isticmaalaya barnaamijka 'autopilot' ee aan adeegsado waxaan haystaa sanduuqa autopilot-ka sidoo kale waxaa la hubiyaa qorshaha duulista tooska ah ee sanduuqa. Ma masiibo ayaa ku jirta feylka diyaaradda.cfg oo haddii ay sidaa tahay sidee ayaan uga baaraandegayaa diyaaraddaan si ay ugu duusho sidii loogu talagalay. Hadda waa inaan tilmaamaa inaan duuliyay diyaarad kale oo aan soo dejiyey oo sida caadiga ah markaad ku dhufato mashiinka 'autopilot Master' waxaa jira aamus marka autopilot-ka uu maqlayo dhawaquna kicinayo sida la moodayo goorta autopilotku gooyo.
Boeing 777-200ER Bilood 4 3 todobaad ka hor #1632
waxay sidoo kale leedahay qaab socodka qulqulka shidaalka khaldan sidaa darteed Boeing 777-200ER waxay u duuli kartaa ilaa ~ 13000 nm oo leh shidaal buuxa, kaasoo wax duminaya runnimada gabi ahaanba.
Albaabka Bromel Dheeraad ah ee Boeing 777-200ER Bilood 4 2 todobaad ka hor #1638
Marka laga yimaado waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed lama qaban karo maxaa yeelay waxaa lagu dhisay moodalka, (mdl file). Kaliya abuuraha moodelka ayaa dib u habeyn kara diyaaradda. Waxaan soo jeedinayaa inay la xiriiraan isaga haddii ay suurtagal tahay.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray Captain747. Sababta: Ma dhammaystirin mawduuca maaddada
Albaabka Bromel Dheeraad ah ee Boeing 777-200ER Bilood 4 2 todobaad ka hor #1639
Waad ku mahadsantahay soo jeedintaas. Waxaan isku dayay inaan helo abuuraha diyaaraddaas nasiib la’aan. Miyaad soo jeedin kartaa meesha aan ka helo isaga / iyada.
Albaabka Bromel Dheeraad ah ee Boeing 777-200ER Bilood 4 2 todobaad ka hor #1640
Hi Bromel, Waxa aan sameeyay waxay ahayd inaan rakibo POSKY Boeing 777-200LR. Moodeelkan waxaan awood u yeeshay inaan wax ka beddelo Air.File si aan u abuuro qaabeyn duulimaad oo kaamil ah. Markii hore waxaan ogaaday markii diyaaradda ay fuuleyso inay hawada ka baxday oo ay damacday inay gasho dukaan 1500ft p / m. Hadda waxay fuulaysaa 2000ft p / m iyada oo aan laga badin hawada. Waxaan sidoo kale rakibay unugga Pky_utility sidaa daraadeed hadda waxaan leeyahay shan albaab oo furan oo ay ku jiraan xamuul iyo xamuul. Waxaan sidoo kale dib u hagaajiyay jaranjarada iyo jumladda gawaarida si aan ugu habooneyn duulimaadkayga (EL AL).
Albaabka Bromel Dheeraad ah ee Boeing 777-200ER Bilood 4 2 todobaad ka hor #1641
Waad ku mahadsan tahay jawaabta, taasi waxay umuuqataa sida saxda ah ee aan raadinayo.
Waa maxay aaladda loo yaqaan 'PKY utility' oo halkeen ka heli karaa?
Mar labaad waad ku mahadsan tahay kaalmadaada.
Albaabka Bromel Dheeraad ah ee Boeing 777-200ER Bilood 4 2 todobaad ka hor #1642
POSKY mar dambe nasiibdarro kuma jirto. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo diro cabirka, laakiin waa 7.8mb waana mid aad u ballaaran oo halkan lagu sameeyo. Waxaan la yaabanahay haddii aan ku ridi karo goobta Rikoooo haddii ay aqbali doonaan?
Albaabka Bromel Dheeraad ah ee Boeing 777-200ER Bilood 4 2 todobaad ka hor #1643
Kaliya dhagsii isku xirkaan simviation.com/1/download-file?file=B772 ...FSX.zip & fileId = 56118 ama gasho biraawsarkaaga. Waxaan rajeynayaa inaanan dhibaatadan ku dhicin.